Ònye kwuru na ị chọrọ snow ka ski? Ọ na-ada iju n'ihi na, dị nnọọ site n'ichepụta ya, ọ na-ahapụ ihe niile ruo ugbu a anyị na-ewere dị ka "nkịtị". N'ezie, e nwere onye nwere ike igosi gị na, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ n'anya nke ski-piste, ụdị dị iche iche a nwere ike ịbara gị mma. A sị ka e kwuwe, ịgba ski na-apụ apụ na-apụkwa n'ụzọ a na-akụtu, ọ dị mma? Ị ga-achọ naanị otu ụzọ skis, ugwu na ... ọtụtụ ọchịchọ maka njem!
Candide Thevex bụ onye kacha akọwa ihe ọ bụ n'ezie ịbụ a freerider ma nwee mmetụta na ọ dị mkpa ịkwanye ebe ọ bụla, site n'ugwu ugwu nke Ugwu asaa dị na Peru, na steepụ nke nnukwu Wall nke China, site na ụlọ nsọ Buddhist na-awụpụ n'etiti windo ma ọ bụ, gịnị kpatara na ọ bụghị, gafere n'etiti oke ọhịa wee daa. n'etiti ọzara, na-agbapụ ájá kama snow. Dị ka ihe a na-apụghị ikweta ekweta? Ee, ị ga-ahụ ya ka ikwere ya, ma n'isiokwu anyị taa, anyị ga-agwa gị ihe 10 ndị ahụ ị nwere ike ịmaghị gbasara Candide Thovex.
1. Olee mgbe MU’ CANANDIDE THOVEX?
A mụrụ ya na May 22, 1982 n'obodo Annecy, France. Otú ọ dị, ebe o tolitere n'ezie ma kpalie mmasị ya maka egwuregwu snow bụ ihe ya onwe ya weere 'ọdụ ya': La Cluzas.
2. Kedu ka CANDIDE THOVEX SI MỤTA SKI?
Akụkọ ha yiri nke ụmụnna Fernández Ochoa, mana ọ dị iche na akara akara aka ha site na mmalite aha ha. Ma ọ bụ ya Idebụbọ na Spanish ọ pụtara "ọcha na-egbuke egbuke". Nke a, ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị, mere ka snow na-aga n'ụzọ ụfọdụ. Ma ọ bụ na nna ya bụ onye nkuzi ski na ebe ntụrụndụ La Cluzas, ya mere, mgbe ọ dị afọ abụọ, ọ na-emekọrịta ihe mbụ na snow. N'ime ọnwa ole na ole, ọ ga-amụta ime jumps na spins, nke mbụ n'ime ụlọ na mgbe ọ dị afọ 5 ọ na-enwelarị ya n'èzí. Ọtụtụ mmasị ya maka egwuregwu a, na mgbe ọ dị afọ 6, ọ sonyeere otu ụlọ egwuregwu ski nke obodo wee mepụta mmasị na mmasị maka Mogul Ski.
3. GỊNỊ KA NDỊ MMADỤ AFỌ nke CANDIDE THOVEX'S CAREER?
Mgbe Candide dị afọ 14, o mere mpụta mbụ ya na asọmpi mba nke ngalaba Mogul, ebe ọ bụ na mgbe ahụ ọ na-enye echiche nke ski n'ụzọ dị iche na nke ọhụrụ. Otu afọ ka e mesịrị, ọ bịanyelarị aka na Quicksilver nkwado nkwado. Ndụ ọkachamara ya yiri ka ọ na-amalite na nnukwu ọsọ, nke na na mmalite nke afọ 2000, na Gravity Games na California, o mere akara dị ịrịba ama na akụkọ ihe mere eme freestyle site n'ịme ntụgharị 720, na-akara nke a dị ka nke kachasị ukwuu. ntụgharị hụrụ n'akụkọ ihe mere eme.. N'ezie, ha malitere ịkpọ ya "onye France na-efe efe." Otú ọ dị, n'ụzọ dị mwute, mmerụ ahụ sochirinụ malitere ịdị arọ na ahụike ya, na-egosipụta mkpa ọ dị ịtụgharị uche n'asọmpi.
4. Ọla-edo ole ka CANDIDE THOVEX nwere?
Ka ọ dị ugbu a, freerider French enwetala nrite ọla edo atọ dabara na ụdị dị iche iche n'ime egwuregwu Winter X: Nnukwu ikuku, Superpipe na Slopestyle. Na mgbe ọ dị afọ 27, ọ meriri chamomix ogbo nke Freeride World Tour dị ka rookie na asọmpi a.
5. GỊNỊ mere CANDIDE THOVEX ji ekpebi ịgbanwe asọmpi maka ịse ihe nkiri?
Mgbe ọtụtụ afọ nke asọmpi na nkwanye ùgwù kpuchiri elu, Candide enweelarị ọtụtụ ọdịda na ihe mberede ndị na-eme ka ike gwụ ya n'ụzọ anụ ahụ na nke mmetụta uche. Nke kacha njọ bụ na 2007, mgbe ọ nọ n'ọkwa nke ọrụ ya. O mere mgbawa n'azụ ya nke merụrụ ahụ ọtụtụ vertebrae, nke mere na ọganihu ya na ọganihu ya na ụwa nke freeride na-etinye obi nkoropụ, ebe ọ bụ na ihe kachasị mma bụ ịkwụsị ski. N'ihi otu ihe kpatara ya, ọ nọrọ otu afọ na-enweghị ski, zuru ike ma gbakee site na mmerụ ahụ ya. Otú ọ dị, ọchịchọ ya ịnọgide na-achọpụta ụwa site n'ime ihe ndị ọ na-eme mere ezuru ya iji sonye n'ọchịchọ abụọ ya, ime ihe nkiri na ski.
6. KEDU KE ISISI GBAKWUO N'ANYA GI?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbake ya dabere n'ọtụtụ oge ọgwụgwọ anụ ahụ, ọ na-ekwukwa na echiche ahụ enyerela ya aka nke ukwuu. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ nweghịzi ike ịrụ ọtụtụ ọrụ ochie ya ma ugbu a ọ ghaghị ịkpachara anya karị, kwa ụbọchị ọ na-azụ ọzụzụ: o nwere mgbatị mgbatị na igwe ntụrụndụ nke anụ ahụ nke na-enyere ya aka mgbe niile.
7. GỊNỊ mere "LAS CLUZAS" ji dị mkpa maka CANDIDE THOVEX?
N'ihi ịbụ oge nke hụrụ ya ka a mụrụ ma tolite dị ka onye na-agba ọsọ, ọ na-ewere ya dị ka nke ya ntụpọ, ogige egwuregwu gị. Ọ na-echetara ya oge niile o so papa ya na-arụ ọrụ, ebe ọ bụ na ọ bụ onye nkụzi n’ụlọ akwụkwọ ski n’ebe ahụ. Maka ya, ọ bụ ebe ọzụzụ ya kacha mma n'ihi na ọ na-agba ya gburugburu mgbe niile. Dị ka ọ na-adịkarị, dị ka Candide si kwuo, mgbe ị mụtara freestyle, ị ga-ahụ ihe na-adịghị mma ma lekwasị anya na ha n'ihi na ezumike na-abịa. Ma na La Cluzas enweghị izu ike dị otú ahụ: ị na-ahapụ otu oghere wee daba n'ime ọzọ. N'ụzọ dị otú a, ị ghaghị ịdị na-agbapụ ma na-awụlikwa elu mgbe niile na nke ahụ bụụrụ ya ụzọ kacha mma iji mụta ihe. Ọ na-ekwu na ike ya niile bụ ebe a. Anyị aghọtalarị ihe mere ha ji akpọ ya "onye France na-efe efe" ma ọ bụ "nwoke ígwè".
8. OLEE mgbe aha CANDIDE THOVEX GỤRỤ VIRAL?
Na mgbakwunye na ịmara ya maka ndekọ ya, Candide na-aga viral na mgbasa ozi mgbasa ozi maka vidiyo ya na YouTube, karịsịa na usoro vidiyo a na-akpọ. Otu n'ime ụbọchị ndị ahụ. Enwere vidiyo atọ ruru ihe karịrị nde nlele ebe onye ọ bụla nọ na-eche maka mkpagbu onye France. Ma ọ bụ site n'ebe ahụ ka akara ngosi ụwa hụrụ ya dị ka ọdịnaya mgbasa ozi dị mma. N'ezie, otu n'ime vidiyo na-ewepụ ume site na ihe karịrị otu bụ ndị o ji nkwado nke Audi mere, nke anyị na-ahapụ ebe a ka ị hụ ma chọpụta na, ka ị bụrụ onye na-agba ọsọ, naanị otu ugwu ka ị chọrọ. na ọtụtụ adrenaline!
9. FIM ole ka CANANDIDE THOVEX mere?
N'ime oge ọrụ ya, o kpebiri isonye ma mepụta ọtụtụ ihe nkiri. Otu n'ime ha abụwo Okwu ole na ole ihe nkiri e wepụtara na 2012 wee nweta ihe nrite maka akwụkwọ akụkọ kacha mma na ihe nkiri kacha mma. Mmepụta a na-akọ akụkọ ndụ Candide site na oge ebube ya ruo na nke kachasị sie ike.
N'ihi ya, ọrụ ya kacha mara amara bụ Otu n'ime ụbọchị ndị ahụ, nke kewara n'ime oge 3, nke ọ bụla wepụtara na 2013, 2015 na 2016 ebe freerider, tinyere igwefoto ihe nkiri, na-edekọ njem ya n'etiti ugwu nta dị iche iche nke ụwa ebe ọ nwere ike na-eme freeride, ịbụ The The nke ikpeazụ n'ime usoro mmepụta ihe a bụ nke ghọrọ ihe kachasị ịrịa ọrịa mgbe o guzobere ihe ịma aka maka ndị na-eso ụzọ ya. N'otu ụzọ ahụ o si gosi ụbọchị ski ya, ọ chọkwara ka ndị ọzọ ṅomie ụdị ya ma gosi ya na obere vidiyo vidiyo ka ụbọchị onye ọzọ na-ahapụ onwe ya dị ka. Nsonazụ ahụ? Onye nwere vidiyo kacha mma ga-eji Candide merie otu ụbọchị ski freeride.
Ọzọ n'ime mmepụta ya bụ Chọpụta Mont Blanc Google kwadoro ya. Echiche bụ na, site n'echiche nke skier, a ga-enwe nlele satịlaịtị nke ụzọ kacha mma na Mont Blanc. Na-adọrọ mmasị, nri? N'aka nke ọzọ, e kwesịrị ịrịba ama na-adịbeghị anya mmepụta nke Anọ si Audi bụ ihe ngosi zuru oke. Ihe mmepụta ndị a mere ka mmasị ma kpalie mmasị na ọkwa mmepụta ihe. Candide kwuru na enwere montage n'ụfọdụ gbaa, mana na oge ịgba ski ya niile bụ eziokwu, ọbụlagodi na-agafe ọzara wee na-egwu ski.
10. Ị na-eche banyere ịrara ndụ gị dum nye ski?
N'ọtụtụ n'ime ajụjụ ọnụ ya, freerider Candide Thevoux ekwuola na ọ bụrụ na otu ụbọchị ewepụ ikike ski, ọ ga-adị ka ịkwụsị ndụ ya. Otú ọ dị, ọ maara na e nwere ụfọdụ ogo na ọkwa nke njedebe anụ ahụ na egwuregwu a. Ọ chọrọ ịkwụsị ịkpata ihe ọ na-eri na-eme ihe ọ hụrụ n'anya ma ọ chọkwara ịnọgide na-emekwuwanye ọrụ ya na ụwa audiovisual, ya bụ: ihe nkiri; mgbe ọ na-eme atụmatụ ezumike nka ya na ebe anwụ na-acha, na-ege ntị reggae (nke anyị chọpụtara bụ ụdị egwu kachasị amasị ya). Ọ bụ nnọọ ihe a na-emekarị, ọ́ bụghị ya? Ọfọn, n'otu ụzọ ahụ nke ụdị ya dị, nke emesịworo mee mgbanwe na guild, otú ahụ ka ndụ ya dị n'èzí ọkachamara ọkachamara. Ọzọ n'ime nrọ ya bụ ịtọlite ​​​​ụlọ akwụkwọ na egwu Las Cluzas ya. Na nkenke ... a ezumike na omiiko ịnyịnya ibu maka ndụ! Dị ka anyị.
Ihe ndị ọzọ: Ndị mmadụ
Nye ọnụahịa6000 € 60.00 € Ụdị oge 16500 € 165.00 € Ị na-echekwa € 105
Vetikal White / Red